Ny Famonoana Faobe tao Thiaroye ny Taona 1944, Tranga Nahamenatra Tamin’ny Vanim-potoana Fanjanahantany Frantsay Tany Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jona 2017 5:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Español, Português, Français
Dikasarin'ny horonantsary “Le Camp de Thiaroye” (ny Tobin'i Thiaroye)
Ny 1 desambra 1944, nisy loza tsy hita izay ilazàna azy nitranga tao amin'ny toby miaramilan'i Thiaroye, tanàna kely ao amin'ny zanabohitr'i Dakar, izay nahafatesan'ireo miaramila senegaly 35 isa, araka ny fanambaràna ofisialy (maherin'ny 300 ny maty araka ireo fijoroana vavolombelona hafa), notifirin'ireo andianà mpanjanaka noho ny nanaovany hetsi-panoherana mba handoavana ny tambin-karaman'izy ireo tamin'ny ady. Ny taona 1988 vao nahafantatra an'izany loza izany ny olon-drehetra, tamin'ilay horonantsarin'ilay senegaly mpanao horonantsary sy mpanoratra, Sembène Ousmane,nomena ny lohateny hoe Camp de Thiaroye , notontosain'i Senegaly sy Alzeria. Fomba fisehon'ny tsy firaharahiana avy amin'ny hery mpanjanaka frantsay io famonoana io, nataony tamin'ireo miaramila Afrikana izay niady teo an-kilany nandritra ny ady lehibe faharoa. Noraràna tany Frantsa nandritra ny 17 taona moa ilay horonantsary, talohan'ny nahafahana nahazo azy tamin'ny DVD ny taona 2005.
Ny pejy Facebook Massacre du 1er Décembre 1944 : CAMP DE THIAROYE (Vonomoka ny 1 Desambra 19944 : TOBIN'I THIAROYE) naorina ho fanomezana voninahitra ireo niharan-doza tamin'io vonomoka nanjo ireo miaramila Afrikana io, nataon'ireo namany an'ady avy any Frantsa, izay niarahany niady ny fahavalo nazi, no mampahatsiahy ny fizotran'ireo zava-nitranga:
Ny 1 Desambra 1944, nataon'i… Frantsa vonomoka ireo miaramila Afrikana, mpanafaka an'i Frantsa. Heloka tokana no nataon'ireo miaramila Afrikana, antsoin'ny rehetra hoe ‘ ‘miaramila Senegaly mpitifitra’ ireo: ny naha-Afrikana azy ireo.
Satria tokoa moa, ahoana no hanazavana ankoatra izay ny famonoana izay natao tamin'izy ireo? Satria ireo Miaramila Afrikana* ireo, izay namerimberenana foana hoe i Frantsa no fanjakana reny malala, dia ny maro an'isa amin'izy ireo, na nalaina an-keriny aza ny ankamaroany, niady tamim-pony ny fahavalo Nazi, izay vitany ihany nony farany. Ka tamin-pireharehana tamin'ny fandresena azon'izy ireo no namerenana azy ireo sy nahatongavany tao amin'ny toby Thiaroye* tao Senegaly, ny 21 Novambra 1944. Hita teny amin'ny endriny ny hafaliana hahita indray ireo fianakaviany, taorian'ny efatra taona be izao tsy naha-teo azy ireo, na teo aza ny dona ara-tsaina nateraky ny ady sy ny fahaverezan'ireo namany maro maty nandritra ny ady na notifirin'ireo Nazis. Tsy niahiahy mihitsy izy ireo hoe tsy hahita ireo fianakaviany intsony, na ireo fireneny, ho an'ireo avy any amin'ireo firenena hafa ao anatin'ny tanibe. 1280 no isan'izy ireo, avy any amin'ireo firenena Afrikana Tandrefana Frantsay.
Fa ny 30 Novambra 1944, nisy hetsi-panoherana tao amin'ny tobin'i Thiaroye, noho ny fitakiana ny tambin-karama tany aloha tsy mbola voaloa sy ny ambiny tamin'ny saran'ny namotsorana azy ireo tsy ho miaramila intsony, izay efa nolavina tamin'izy ireo tany Frantsa, talohan'ny niverenany tany Afrika. Nalainy ho takalonaina noho izany ny jeneraly Damian. Ny 1 Desambra 1944, nanafika tamin'ny alina ilay toby tsy nitàm-piadiana ny andiany avy any Saint-Louis, tsy nisy fampitandremana mialoha akory. Telopolo isa teo ho eo no sisampaty izay nogadraina 1 ka hatramin'ny 10 taona, niampy lamandy, ary fahaverezan'ny tambin-karamany tamin'ny namotsorana azy ireo tsy ho miaramila intsony. Tamin'ny taona 1947 izy ireo vao navotsotr'ilay filoha Frantsay tamin'izany fotoana izany Vincent Auriol, fa tsy naverina tamin'izy ireo ireo zony, sady tsy nahazo zo handray fisotroandronono.
Miaraka tamin'ny tononkalo natolotra ho an'ireo niharan-doza nanomboka ny volana desambra 1944, avy eo nisy lahatsoratra iray niseho ny volana jolay 1945 tao amin'ny gazetiboky Esprit, lasa iray amin'ireo olo-malaza vitsy niampanga io heloky ny fanjanahantany io i Léopold Sédar Senghor. Mifanohitra amin'izay indray, niezaka ny nanena ny fandraisan'anjaran'ireo miaramila ireo ny sampandraharaha frantsay tamin'izany fotoana izany, mba tsy handoa ny tokony haloany, alohan'ny namonoana azy ireo. Nampiseho nibaribary ireo laingan'ny fanjakana sy niampanga ny fihetsik'ireo manampahefana frantsay amin'io raharaha io, ny Kaomitin'ny Fahamalinana manoloana ny fampiasan'ny daholobe ny tantara, tao anatin'ny taratasy nampita Fanangonantsonia nalefa tamin'ny Filoha François Hollande:
Zo maro nohosihosena.
Nitaky ny fandoavana ny tambin'ny nanagadràna azy izay nolavin'ny manampahefana miaramila ao Dakar tsy ho aloa, izay efa fanitsakitsahana ny lalàna nanan-kery tamin'izany, ireo lehilahy niady ho an'i Frantsa ireo.
Narovan'ny ministeran'ny Ady io fanosihosena zo io, io ministera io izay nanao izay hinoana, tamin'ny taratasy ny 4 desambra 1944 – noho izay taorian'ny famonoana-, fa efa nandray ny volany manontolo ireo olona naverina tamin'ny taniny ireo talohan'ny niondranan'izy ireo avy tany frantsa.
Famonoana faobe efa nomanina mialoha avy eo nafenimpenina tamin'ny zavatra hafa.
Mba hampitsaharana ireo fitakiana ara-drariny nataon'ireo lehilahy ireo, nisy hetsika hery miaramila natsangana, natao hanitsahana/hamotehana ireo mpikomy. Mba hanafenana ilay vonomoka, nisy ireo manambonihahitra sasany nanao tatitra fiampangàna, ary namoromporona hatramin'ny kely indrindra ny tantara ofisialinà fikomiana. Tao anatin'ireo tatitra ireo, nolazaina fa niasa ho an'ny Alemàna ary nitam-basy mahery vaika ireo voafonja taloha ireo. Mba hanazavana ilay fitifirana mahery vaika natao, nampangaina ho nitifitra voalohany izy ireo.
Nandritra ny taompolo maro, nety tsara daholo ny ezaka hamafana ny mety ho tandindon'ilay vonomoka, hany ka tsy fantatsika akory, 73 taona aty aorian'ireo zava-nitranga, hoe firy ireo miaramila novonoina na hoe aiza no milevina ny ambin'ireo niharan-doza. Ny lahatsoratr'i Benoît Hopquin navoaka tao amin'ny Le Monde culture et idées, ny 23 martsa 2013, maneho ny adin'ilay mpahay tantara Rtoa Armelle Mabon, profesora ao amin'ny anjerimanontolon'i Bretagne-Atsimo sady manampahaizana mikasika ireo gadran'ny ady avy amin'ireo zanatany frantsay teo aloha, mba hanehoana mivantana ireo laingan'ny tafika frantsay ary hamerina ny marina mikasika io heloka bevava io:
Nanomboka teo, tsy nisy zavatra nazava, afa-tsy hoe nisy fitifirana nipoaka taorian'ny tamin'ny 9 ora. Eto no tokony hikaroka tsara ilay mpahay tantara, satria tena mifandrirotra ireo tatitra. Hafa ny fijoroana vavolombelona an-tsoratry ny lietnà kolonely Le Berre raha oharina amin'ny an'ny sefon'ny andian-tafika Le Treut, ny an'ny kapiteny Olivier, ny an'ny kolonely Carbillet, ny an'ny jeneraly Dagnan, ny an'ny lietnà kolonely Siméoni, ny an'ny lietnàn'ny zandarimaria Pontjean, ny an'ny kolonely Le Masle na ny an'ny jeneraly Perier, izay nitarika ny kaomisiona mpanadihady tamin'ny taona 1945. Misy taratasy sasany na tatitra sasany tsy hita mihitsy aza. “Nanjavona izy ireny”, hoy ny fanazavan'ilay mpahay tantara, izay nitety ireo karazana ivontoerana rehetra nitahirizana ireo antontan-taratasy tamin'izany fotoana izany, tany Frantsa, ary tany Senegaly koa.
Tao anatin'ireo filazàna ny zava-nitranga no nitombo ny hevitra hoe nisy ny fitifirana tamin'ny basy marovava na basikely marovava avy tamin'ireo mpikomy. Tamin'izany fotoana izany, nampanao ny lisitr'ireo fitaovam-piadiana nolazaina ho hita tamin'izany ny jeneraly Dagnan. Nasain'i Armelle Mabon, nanaovan'ireo manampahaizana manokana avy amin'ny Vondrona frantsay mpahay fitaovam-piadiana, fandalinana ilay lisitra. Tsy misy mitombina ilay lisitra ary tsy misy manamarina ny fampiasana ireo fitaovana be ireo – fiara mifono vy iray, fiara tsy laitram-bala roa, fiara mpitifitra variraraka telo – mba hamaliana an'izany.
Amin'ny filazàna ofisialy, maramila Afrikana 35 isa no maty tamin'io 1 desambra io, tarehimarika nolazain'i François Hollande ihany koa tamin'ny kabariny tany Dakar. Efatra amby roapolo no maty tsy tra-drano ary iraika ambin'ny folo tany amin'ny hopitaly. Fa ny tatitry ny jeneraly Dagnan tamin'ny 5 desambra kosa nilaza “maty 24 isa ary naratra 46 isa notaterina tany amin'ny hopitaly ary maty avy eo“,izany hoe 70 no maty. “Nahoana izy no nanana tombotsoa nampitombo ny isa ?”, hoy ilay mpahay tantara izay nanome lanja kokoa io tarehimarika farany io.
Tamin'ny fivoriana nokarakaraina tao amin'ny Anjerimanontolon'i Bretagne Atsimo, tany Lorient ny 27 ka hatramin'ny 29 novambra 2014, natokana ho an'ireo vonomoka nataon'ny fanjanahantany, Rtoa Catherine Coquery-Vidrovitch, frantsay mpahay tantara, manampahaizana manokana momba an'i Afrika ary profesora nahazo maripankasitrahana tamin'ny anjerimanontolo Paris Diderot, nanoratra tao amin'ny vohikalan'ny Kaomitin'ny Fahamalinana manoloana ny fampiasan'ny daholobe ny tantara :
Tsy fantatra hatramin'izao hoe aiza izy ireo no nalevina, tsy isalasalana hoe anaty lavaka itambarambe tsy lavitra teo na tany amin'ny fasana kelin'ny miaramila tsy tadidy intsony any Thiaroye. Jean Suret-Canale no iray tamin'ireo voalohany nilaza io zava-nitranga io tao amin'ny ampahany faharoan'ny Tantarany feno mikasika an'i Afrika Andrefana (1963). Naheno mikasika an'io aho, raha ny amiko manokana, tamin'ny faramparan'ny taona 1970, avy tamin'ireo Senegaly namana izay nahalala ny andinindininy tamin'ny zava-nitranga. Nandeha nitady ilay fasana aho, izay hitako ihany nony farana, na teo aza ireo fahasarotana sasantsasany satria tsy nisy nahalala intsony hoe aiza ilay izy, takona tao ambadiky ny rindrina kely tsy lavitry ny làlana mankany amin'ilay morontsiraka kely (efa namboarina ary voakarakara tsara izy io ankehitriny).
Ny volana novambra 2014, tamin'ny feon'ny Filohany, Hollande, nanao fahatsiarovana ireo niharan-doza tamin'ilay heloka bevava i Frantsa, fa tsy mbola nanao fialantsiny ihany anefa hatramin'izao. Efa 70 taona taorian'ny ady lehibe faharoa i Frantsa vao nanome fanamoràna ny fahazoana zom-pirenena frantsay ireo miaramila Senegaly mpitifitra.
Any Afrika, misy finiavan-tena vitsivitsy mba hankalazàna azy ireo. Ny ao Senegaly izao nanao Andro ho an'ireo miaramila Afrikana mpitifitra mba ho fahatsiarovana ireo miaramila rehetra izay nandray anjara tamin'ireo ady teo anilan'i Frantsa. Ny lohahevitra tamin'ity taona ity dia Ireo zava-nitranga tao Thiaroye : tantara sy fahatsiarovana. Ao Bamako, Mali, misy tsangambato natokana ho an'ireo niharan-doza tao Thiaroye.